“စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်(၃၉)အတွက် အဖြေ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်(၃၉)အတွက် အဖြေ”
Posted by မောင်ရိုး on Oct 22, 2012 in Food, Drink & Recipes | 39 comments
စားမယ်ဝါးမယ် ၊ဒံပေါက်ချက်ကြည့် မယ်
အဘဖောကပြောတယ် ……အားကျမခံ ဒန်ပေါက်တဲ့ …..။
အင်းးးးး…….ခက်တာက အဲဒီဆိုင်တွေထဲက နှစ်ဆိုင်က ပွဲ (၅၀) အနည်းဆုံးရောင်းတာလေ ….။
ကောင်းသန့်  ကျပြန်တော့လည်း သွားရလာရခက်တာနဲ့ ..ပြီးတော့ ဒန်ပေါက်တစ်မျိုးတည်းသီးသန့် 
ရောင်းတာမဟုတ်ပြန်ဘူး ….။ မဖြစ်သေးဘူး ….မဖြစ်သေးဘူး …….။
ဒီအတိုင်းဆို မောင်ဆာမိတို့ ရန်ကုန်သားတွေ အကြွားပိုတယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့့ ……ကဲ ကဲ…..
ထင်ချင်သလိုသာထင်ကြတော့ …….သိကြားမင်း ဆင်းကယ်မှ ဖြစ်တော့မယ် …..။ ဒီလို….ဒီလို ….
မောင်ဆာမိက တစ်ချိန်က လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ အကြာကြီးနေခဲ့တာဆိုတော့ ….အစားအသောက်လည်းခုန်မင်
အကောင်းကလည်းကြိုက်…..ပြီးတော့ ဒံပေါက်ဆိုအသေရရ အရှင်ရရ …။အဲဒီမှာ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့  နာမည်ကျော်ဒံပေါက်ဆိုင်ကြီးက လက်ရင်းတပည့် ကြီးချက်တာကို အစအဆုံး ထိုင်ကြည့် 
ခဲ့ ဖူးသဗျ ….။ ဘယ်ရမလဲ …ချက်ချင်း ပြန်ချက်ကြည့် တာပေါ့  …။
ဟုတ်ကဲ့  …..အခု မောင်ဆာမိပြောမဲ့ ဒံပေါက်ချက်နည်းက အဲဒီ မြင်ဆရာဆီကပါ ….။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဆရာ
ဆိုတာ ဆရာပဲမို့ အရင် ပြောရတာဗျို့  …..။တော်ကြာ “ဆရာကာပြန် ….ဒံပေါက်စားပိုးနင့် ”ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ..။
ကဲဗျာ ….အချိန်မရှိဘူး …စလိုက်ကြရအောင် ….
– ဆန်နို့့ ဆီဗူး (၄)လုံး
– ကြက်သား (၆၀)သားခန့် ( ရင်အုပ်ပိုင်း ၊ပေါင်ပိုင်း )တစ်ကောင်လုံးအလေးချိန်၄၅ကျပ်သားခန့်ရှိကြက်
– စပျစ်သီးခြောက် (၅) ကျပ်သားခန့် 
– သီဟိုစေ့  (၅) ကျပ်သားခန့်  (မလှော်မှီ သဘာဝ)
– ထောပတ် တစ်ဆယ်သားခန့်  ( မြန်မာထောပတ်မရလျှင် မာဂျရင်း စမ်းသုံးကြည့် ရန် )
– နို့စိမ်း ဗူးတစ်ဝက် (သို့ ) နွားနို့ တစ်ခွက်ခန့် 
– သစ်ဂျပိုးခေါက် (သို့) သစ်ဂျပိုး အမှုန့်  အနည်းငယ်
– ကရဝေးရွက် (၆)ရွက်ခန့် 
– ဖာလာစေ့  (၁၀)စေ့ ခန့် 
– လေးညှင်းပွင့်  (၅)ပွင့် 
– ဆီ (၁၅) ကျပ်သားခန့် 
– ဆား ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ဒံပေါက်မဆလာ ……
(ဒံပါက် မဆလာမရှိလျှင် တစ်အိုးစာ မဆလာလုပ်နည်းကို အဆုံးတွင်ဖေါ်ပြပါမည် ။)
ဦးစွာပထမ ကြက်သားကို ဒံပေါက်ဆိုင်များမှ ပုံစံအတိုင်း ပေါင် ၊ရင်အုပ်ပိုင်း ခွဲခြမ်းပြီး ဆား၊ နွားနို့(သို့)
နို့စိမ်း ၊ ဟင်းခတ်မှုန့်  ၊ ဒံပေါက်မဆလာ တို့ဖြင့်  တစ်နာရီခွဲခန့်  နှပ်ထားပါ ။ နှပ်နေစဉ်အတွင်း အထက်က
စပျစ်သီးခြေက်များ ၊ သီဟိုစေ့များကို ထောပတ်ဖြင့် ဆီပူထိုး၍ ထောပတ်ဆီသပ်သပ် ၊ ကြော်ပြီး သား
စပျစ်ခြောက်နှင့်  သီဟိုစေ့ များကိုသပ်သပ်ခွဲထားပါလေ ….။
ထို့နောက် …..နှပ်ထားချိန်စေ့ပါက ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းသို့ ၄င်း ကြက်သားများကိုအောက်တွင်
စီ၍ ထည့် ရပါမည် ….။ (လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်အိုးဖြင့်  ချက်၍ရသည် )ကြက်သွန်နီသုံးမွှာခန့်ထောင်း၍
ထိုကြက်သားများနှင့် ရောနယ်ပြီး ထည့် ပါလေ ……..။ကြက်သားများနှပ်ထားစဉ်က
ထွက်ရှိသော အရည်များကိုရောမထည့် သေးပဲ ရေထည့် မည့် အခါမှသာ ရေချိန်အတိုင်းတွက်ချက်၍
ထည့် ရပါမည် ၊ သို့မဟုတ်ပါက ရေအချိုးများပြီး ထမင်းပျော့ မည်ဖြစ်ပေသည် ။
ကြက်သားတုံးများထည့် ပြီးပါက ဆီတစ်ဆယ်သားခန့်  ကိုထည့် ရမည် …။ ပြီးနောက် …..ရေဆေးပြီး
အသင့် စစ်ထားသော ဆန်ကို ၄င်းကြက်သားတုံးများပေါ်မှ ညီညာစွာဖြန့် ထည့် ရမည် ။ ဆန်များနှင့်အတူ
သစ်ဂျပိုးခေါက် သုံးလေးစခန့်  ၊ ကရဝေးရွက် (၆)ရွက် ၊ နှင့်  ပဲစိမ်းဗူး တစ်ဝက်ခန့် ကိုသမမျှတစွာ ရော၍
ထည့် ပါလေ …..။ဖာလာစေ့နှင့်  လေးညှင်းပွင့်  တို့ကို ကြက်သားနှင့် အတူ ထည့် ရန်မမေ့ ပါနှင့်  …..။
ဆန်ထည့် ပြီးပါက စောစောက ကြက်သားမှထွက်ရှိသောအရည်များ အပါအ၀င် မိမိထည့် နေကြ ရေခန်း
ချက်နည်းအတိုင်းရေကိုချင်တွယ်၍ထည့် ပါ ။ ဆန်အမျိုးအစားမတူလျှင် လည်းကောင်း ဆန်သစ် ဆန်ဟောင်း
မတူလျှင်လည်းကောင်း ရေအချိုးကွာနိုင်သဖြင့်  မိမိ ထည့် ချက်နေကျပုံစံအတိုင်း ထည့် စေခြင်းဖြစ်သည် ။
(ဆန်သစ်နှင့်  လုံးဝ မချက်ပါနှင့် ) ရေထည့် လျှင် ညင်သာစွာထည့် ရပါမည် ..။ အသားများပေါ် ဖုံးအုပ်
ထားသော ဆန်များ ပုံမပျက်စေရန်ဖြစ်သည် ။
ပြီးနောက် …ထမင်းအိုးကိုပံမှန်အတိုင်း ချက်ပြီး ထမင်းနပ်သောအခါ ချက်ခြင်းမချသေးပဲ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် 
ထပ်၍နှပ်ပါလေ …..။ နောက်ဆုံးအကြိမ်နှပ်ပြီးပါက အထက်က ဆီပူထိုးခဲ့ သော သီဟိုစေ့  နှင့်  စပျစ်ခြောက်
တို့ကို အိုးထဲသို့ ဖြူး၍ထည့် ပြီးလျှင် ယခင်က သပ်သပ်ဖယ်ထားသော ထောပတ်ဆီများကို အဆိုပါထမင်း
အိုးထဲသို့ မျှတစွာ လောင်းထည့် ပါ ။ အရောင်ဆိုးလိုပါက ဖျော်ထားသောဆေးရောင် အနည်းငယ်ကို
ထိုအချိန်တွင် ပက်ဖျန်းရမည်ဖြစ်သည် ။ ပြီးလျှင် …(၁၀) မိနစ်မျှ အဖုံးပိတ်ပြီး ပြန်နှပ်ပါ ။ ထို့နောက် အဖုံး
ကိုဖွင့် ၍ ထမင်းများကို ခတ်တုံးတုံးယောက်မ (သို့) ထမင်းခတ်ဖိုက်ဘာဇွန်းဖြင့်  အထက်အောက် သမပြီး
အောက်ဆုံးမှ ကြက်သားတုံးများကို သီးသန့်  ဖယ်ထုတ်ထားပါ ။ ယခုအချိန်မှစပြီး ရွာသူားတို့အကြိုက်
စတင်သုံးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည် …..။
(ယခုချက်နည်းသည် ဒံပေါက်အစိမ်းဖေါက် ဟုလူသိများပါသည် ။ ထမင်းသပ်သပ် ဟင်းသပ်သပ်
ချက်နည်းကို မဝေေ၀မှ ရေးသားပြီးဖြစ်ပြီး အကယ်၍များ မဝေေ၀ဖတ်ဖြစ်ပါက ယှဉ်တွဲလေ့လာနိုင်ရန်
ပြန်လည်၍ link လေး ထည့် ပေးစေလိုပါကြောင်း )
မဆလာစပ်နည်း ။ ။ ဇီယာစေ့ စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်း ၊ ဖာလာစေ့ (၇)စေ့  ၊လေးညှင်းပွင့်  (၃)ပွင့် 
နာနတ်ပွင့် ဖတ် (၃)ဖတ် တို့ကို မီးမကျွမ်းစေအောင်လှော်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ ။
အသား (၆၀)သားခန့်အတွက် တစ်အိုးချက်အချိုးဖြစ်သည် ။
တစ်ခါအဆင်မပြေလျှင် နောက်တစ်ခါလုပ်ကြည့် ပါ ။ တစ်နေ့တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မည် ၊။
ဒန်ပေါက်က စားခဲပေမယ့် လုပ်နည်းလေးဖတ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားလို့ ချက်လိုချက်ငြား
အရင်တုန်းက ဖေဖေ့ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်လည်း ဒန်ပေါက် ကောင်းကောင်းဖောက်တတ်
တယ်…တစ်ခါပဲ စားဖူးလိုက်တာ….ဆီခြောက်ခြောက်လေးနဲ့မို့အရမ်းလည်း မအီ၊ spicy
လည်း မဖြစ်ဘူး…ထမင်းအဖြူနဲ့စပ်ကျား အရောင်ဖောက်တာလေးကလည်း သုံးဘိန်းရဲ
ဖျော့ဖျော့လိုနဲ့လှပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စားကောင်းတယ်..(အရောင်မကြိုက်တာတောင်
စားချင်သွားတာ)…ဆန်ကတော့ ရိုးရိုးဆန်မဟုတ်ဘဲ ဘာစမာတီ ဆန်(Basmati Rice)
ဆန်လုံးရှည်ရှည်နဲ့ ဒန်ပေါက်ဖောက်ရင်သုံးတဲ့ဆန်ပါတဲ့…စတိုးဆိုင်မှာ ရှိမှာပါ….
ဒီနားက စတိုးဆိုင်မှာတော့ ရှိတယ်…
ဟရေး… ကိုရင်ဆာရဲ့ ဒီပို့စ်ကို လွတ်သွားတယ်…
စိနတိုင်းကိုရောက်နေလို့ ဒန်ပေါက်ကတော့၊ ဝေးနေတာကြာပေါ့…
ချက်စားဖို့ကလည်း တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ မနိပ်သေးဘူး…
ဒီပို့စ်မှာ အရင်ဆုံးမန့်သွားသူကလေး ရောက်လာမှ၊ ချက်ကျွေးရမယ်… ဟီ ဟိ
ချက်ကျွေးခိုင်းမယ်များပြောမလား မှတ်တယ်… ချက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲ…
ပြောဖူးပါတယ်… ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်ရင်… ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား….
ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် တစ်ခါမှ မဖောက်ဖူးဘူး။
ဒီမှာ ဒန်ပေါက်မဆလာတွေ အသင့်ရောင်းတာရှိတယ်။
ဝေဝေ ရဲ့ “ဒန်ပေါက်အလွယ်ချက်စားမယ် easy cook” Post Link လေးက ဒီမှာပါ။
လင့်ရှာပေးထားတဲ့ အရီးလတ်ကို ကျေးဇူးပါ …
ကျွန်မက နှစ်တော်တော်ကြာအောင် ကုလားမဖြူဖြူတွေနဲ့ မီးဖိုချောင်တစ်ခုထဲ သုံးခဲ့ဖူးတယ် … သူတို့ချက်တဲ့ ဒါန်ပေါက်နဲ့တူတဲ့ ထမင်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဗမာနည်းနဲ့ မော်ဒီဖိုင်း လုပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာဖြစ်အောင် ချက်စားလေ့ရှိပါတယ် … ဗမာအကြိုက်ကတော့ ချိုပြီးစိမ့်တဲ့အရသာမျိုး …
ထမင်းနဲ့ ကြက်သားရောချက်တဲ့ ဥဇဘတ်စတိုင် …
ကျေးဇူးပဲဗျာ ။ကျနော်ပြန်ရှာတာခက်နေလို့။
အရီး နဲ့  မနှင်းနှင်း ရေ
ကျနော် မချက်တော့ တာ အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းကလေ
ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ ။ခုတော့ ကြက်ဥတောင်မပြုတ်တတ် ချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ်
သြော် .. မထသ ဦးဆာမိပါ …တကား ….. :harr:
နောက်ရွာထဲက အပျိုတွေ လူပျိုတွေမင်္ဂလာဆောင်ရင် ဖြစ်ဖြစ်
ရွာသူသား မွေးနေ့ အလှူလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုဆာမိဒါန်ပေါက်ကို မယူမနေရ စံနစ်နဲ့ရောင်း
အမြတ်10%ကို ရွာကလုပ်မယ့် အလှူအတွက်ရန်ပုံငွေဖယ်ထား
အရောင်မဆိုးဘူးဆိုရင် ဒံပေါက်ကဘယ်လိုအရောင်များထွက်မှာပါလိမ့် …
ချက် ကြမယ်..ဟေ့ကောင်းကောင်း…
လန်ကျောက်ဆိုတာက တော့ တရုတ်လိုဆိုရင်
တစ်ယောက်ကလမ်းဖာ နောက်တစ်ယောက်က ရေပိုက်ပြင်ဘို့ဖောက်
ဒံပေါက်ဆိုတာကတော့ စားပြီးရင်းလဲစားချင်ရင်း ဂျပန်မနေကြာနဲ့သိပ်မကွာဘူး
786 ဒံပေါက် မစားချင်လို့ဖြတ်ထားတာကြာပြီ ၉၆၉ ဗမာဒံပေါက်ကလဲ တကူးတက သွားစားရမှာ အခုကိုဆာမိ ပြောလို့ နည်းတော့ရပြီ ရုံးပိတ်ရက်ကျရင် ရမ်းသမ်း cook ကြည့်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ် ကျေးဂျူး ပါ။
ဒါဆို ကိုဆာမိဆီက ဒါန်ပေါက်လုပ်နည်းရပြီးပြီမို့ အော်ဒါချက်ပြီး အလှု၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေ ပို့လို့ရပြီဗျာ။
ရေခဲမုန့်လုပ်နည်းကတော့ အစားသင်တန်းတစ်ခုက TV မှာ လုပ်ပြတာ မြင်ဖူးတယ်
တယ်..အဲ့လိုမလှည့်ချင်ရင် စက်နဲ့လှည့်မယ်ဆို စက်တစ်လုံးဝယ်…ရေခဲတုံးတွေလည်း
၀ယ်…ပြီးရင် ရေခဲမုန့်ခဲဖို့ ရေခဲမုန့်ပုံး(၂ ထပ် ၂ ပုံးထင်တယ်..သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး)
တွေဝယ်…ဟူးးးးးးးးးး…လုပ်ရခက်..ပစ္စည်းဖိုးနဲ့တင် နည်းတောင် မမှတ်ချင်တော့ဘူး..
စားချင်စိတ်ပြင်းပြနေရင်တော့ အကောင်းဆုးံဆိုင်တစ်ခုရွေးပြီးသာ စားလိုက်ပါတော့လို့
အကြံပေးချင်ပါတယ်….း) …
ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ဒန်ပေါက်က ကျုံးဘေးမှာရောင်းတာလေ ။အရင်ကတော့ 
ဖက်နဲ့ ထုပ်ပေးတယ် သူ့ ထူးခြားချက်ကဆေးမဆိုးဘူး ။ နာမည်မေ့ နေလို့ ဗျ
အခု သူ့ သားတွေဆက်ရောင်းနေတယ်ထင်တယ် ။
အစ်ကို ရန်ကုန်ဒံပေါက်စားဖြစ်ရင် ယှဉ်ကြည့် ။အဲဒီကအစိမ်းဖေါက်က
မင်ဂါဘွဲကျရင် ဆာဆာခြက်ဘေးမယ် စိတ်ချ
ဦးကြောင် ကဗျာကို အစ်ကို ကိုပေါက် ရှင်းလင်းချက်ထုတ်တာဂွတ်ထ
ဒါနဲ့ ကြောင်တွေကဒံပေါက်ဆိုသိပ်ကြိုက် တဲ့ 
အဆင်မပြေရင်ပြောနော် ။ဆီနဲ့  ထောပတ်ကတော့ စိတ်ကြိုက်အတိုင်းထည့် ဗျာ
ဗျို့  ကိုခင်ခ ရေ
ကျနော်ပို့ စ်တင်ပြီးကတည်းက မဝင်ဖြစ်တော့ လို့ ။ကျနော်လည်းအစ်မပဒုမ္မာ
နည်းကို လုပ်ကြည့် ပါဦးမယ် ။
ခုမှ ပဲ နာမည်နဲ့ ပိုစ့် နဲ့ လိုက် သွား တော့ တယ်။ သေချာ မှတ် သွား ပြီး လာမဲ့ ပိတ်ရက် မှာ စမ်းသပ် ကြည့် မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမှာ ဒံပေါက် မျိုး စုံ ရ ပေမဲ့ မြန်မာ ပြည်က ဒန်ပေါက်နဲ့ တော့ မတူ ကြ ပါ။ ဦး ဆာမိရဲ့ ချက်နည်း ပြုတ်နည်း အရေး အသား လေးတွေ ဖတ် ရ တာ ငယ်ငယ်တုန်း က တောမှာ ဖတ်စရာ မရှိ လို့ ရှိတဲ့ စာအုပ်ပဲ အလွတ် နီးနီး ရအောင် ဖတ် ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ ဦးကြီး ပု စာအုပ် ကို သတိ ရ မိတယ်။
ကထူးဆန်းပြောသလို မထသ ပါလား…
စာရေးပြီးချက်နည်းပြောတာထက်စာရင် တကယ်ချက်ကျွေးပါလားလို့။ လက်တွေ့လုပ်ပြတော့ ပိုပြီးတော့သေချာတာပေါ့ :-)
တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဦးပါရဲ ၀ါဆို ထမင်းရယ် ကိုဆာမိရယ် ဒန်ပေါက်ရယ်ဆို ရှယ်ပဲ နေမှာ
ကိုဆာမိရဲ့ ဒန်ပေါက်ရယ်လို့ ရေးတာပါဗျို့ ဘယ့်နှယ့်မှားပြန်တယ် မသိ
ဆာမိ ဒါန်ပေါက် ချက်စားကြည့်မယ်….။ အဆင်မပြေလို့တော့ အဟင်းးး တွေ့မယ်….။ ဦးဗိုက်နဲ့ တိုင်ပြောမယ်….။ အော်….။ အူးဗိုက်ကော… ဒန်ပေါက်နဲ့ ဘီအီးနဲ့ မြည်းပါဦးလား ……..
အုန်းထမင်းနဲ့အမဲနှပ်ပါ ရောကျွေးလိုက်ပါတော့ဗျာ…
ကယ်ဘာဦး..အူးဗိုက်ကို လန်ကြုတ်နေကြပြီ အရပ်ဂဒို့ ရဲ့
ဟရေး. အားကို့ ဆားမိ
ဒါမှ မြန်းမာ ဒန်ဖေါက် တဲ့ဟေ့
ဆလမ် မွာလေကွမ်းသီး .။
ဆုပေးပွဲအတွက် ဒန်ပေါက်အော်ဒါ လက်ခံပါ။
ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥကို မီးအေးအေးနဲ့ ကျိုနေတဲ့ နွားနို့အိုး အပေါ်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြွက်မြီးတန်း လောင်းထည့်ပေး၊
အဲဒီအချိန် နွားနို့ကို အဆက်မပြတ်မွှေပေး(သမသွားအောင်)မမွှေရင် ကြက်ဥက အဖတ်အဖတ်တွေဖြစ်ပြီး ကျက်သွားတတ်တယ်။
(ရောင်းတန်းကတော့ castard powder ထည့်တယ်။ကိုယ်စားဖို့ကတော့ အမှုန့်မပါလေကောင်းလေ)
ပြီးရင် အအေးခံပြီး ရေခဲသေတ္တာ freezer ထဲထည့်ထား၊ခဲပြီဆိုရင် ခဏခဏ ထုတ်ပြီး ခြစ်ခြစ်ပေး(မွမွလေးနေအောင်)
ရေခဲမုန့်လုပ်မစားတော့တာ အနှစ် ၂၀လောက်ရှိပြီဆိုတော့ အချိုးမေ့နေတယ်။စာအုပ်ထဲမှတ်ထားတာတွေ့ရင် ရေးပေးမယ်။
နွားနို့ ၁ ပိဿာကို ကြက်ဥ ၁၀လုံးလောက် ထည့်ရတယ်ထင်တယ်။သကြားနဲ့ အနံ့ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုထည့်။
နွားနို့များရင် ရေခဲမုန့်ကြမ်းပြီး ကြက်ဥများရင် ပျော့တယ်။
မပဒုမ္မာရေ ရေခဲမုန့်လုပ်နည်းလေး သေချာရေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်သလို ကိုဆာမိရဲ့ဒါန်ပေါက်လုပ်နည်းနဲ့
အမရဲ့ ရေခဲ့မုန့်လုပ်ပုံရော ကူးယူသိမ်းထားလိုက်တယ်လေ။ နောင်များစိတ်ကူးတည့်ရင် လုပ်ချင်လည်း ရတာပေါ့ခင်ဗျာ။
မနှင်းနှင်းရေ ကျွန်တော်ကရေခဲမုန့်သိပ်မကြိုက်ဘူးဗျ၊ ရေခဲမုန့်နည်းလေးရေးပေးဖို့တောင်းဆိုရေးခဲ့တာ ကျွန်တော်စားချင်လို့မဟုတ်ပါ ဒါန်ပေါက်နဲ့ရေခဲမုန့်က တွဲလျှက်ကျွေးဖြစ်ကြတာများလို့ တစ်စုတည်း သိမ်ထားချင်လို့ပါခင်ဗျ။
ဒန်ပေါက်က ချက်စားဘူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကြက်သားကိုနှပ်ရင်ဒိန်ချဉ်ထည့်နှပ်တယ်။ ဈေးထဲက၀ယ်လာတဲ့ဒန်ပေါက်မဆလာနဲ့ကြက်သွန်နီဆီသတ် ရောမွှေလိုက်တာနဲ့ဒန်ပေါက်နံ့သင်းနေတာပဲ။ ကြက်သွန်နီဆီချက်များမှအနှစ်များပြီးချိုတယ်။ နှပ်ထားတဲ့ကြက်သားရယ်ကြက်သွန်နီဆီချက်ရယ် ရောပြီးအိုးအောက်မှာခံထားချက်တာ တူးသွားတော့ ကြက်သွန်နီဆီချက်ကြက်သားတွေအကုန်တူးကုန်ရော။နောက်တခါချက်တော့ အောက်ကထမင်းနဲနဲတထပ်ခံပြီးမှ ကြက်သားနဲ့ကြက်သွန်နီဆီချက်ရောမွှေထားတာထဲ့တယ်။ ဂျိုးတူးရင်အသားတွေမတူးအောင်လို့။
ကုလားတွေချက်တဲ့ဒန်ပေါက်နံ့နဲ့ ဈေးထဲက၀ယ်တဲ့ဒန်ပေါက်မဆလာ နံ့ကွာတယ်။ ဈေးထဲက၀ယ်တဲ့ဒန်ပေါက်မဆလာ က အများကြီးပိုမွှေးတယ်။
တကယ်ချက်မယ်ဆိုရင် မဝေ ပို့ စ်တွေကိုလည်းလေ့ လာကြည့် ပါဦး ။
ဘီအီးနဲ့ ရောသောက်ရင် အန်တတ်တယ် တဲ့ 
စားရဲရင်တော့ ပို့ ပေးလိုက်မယ်
စိတ်ဝင်စားရင် ထပ်လာဦးမယ်လေ ။စားဖိုမှုးဂိုဏ်း ပြောင်းမလားလို့ဟဲဟဲ
တကယ်ကျွေးချင်ပါ့ ဗျာ ။ ကိုရင်သာလာနိုင်မယ်ဆိုလာခဲ့ 
မချက်နိုင်တော့ ပေမဲ့  ကောင်းသန့် မှာ ဧည့်ဝတ်ပြုပါ့ မယ်
တွေ့ ဆုံပွဲကြရင် လာခဲ့ ပါ ။ အနည်းဆုံးတော့ဝါဆိုထမင်းသေချာပါတယ် ဟဲဟဲ
ကျုပ်က အခုထိ ကျုံးဘေးကဒံပေါက်ကိုသတိယနေတုန်းဗျ
အဆင်ပြေစေရမယ်စိတ်ချ။ မပြေရင် မေး နဲ့  ချက်ပို့ လိုက်မယ်
အမလေး မောထှာ စလံ အမလေးကွမ်းသီးအပုတိနဲ့ လည်းတိုးနေဦးမယ် သတိထားဗျ ။
တာဝန်မပျက် ထမ်းဆောင်ပေဦးနော ဒီည ချန်ပီယံရွေးမယ်
ဒန်ပေါက်ဘူဖေးကျွေးမလို့ လား ဟဲဟဲ
ရေခဲမုန့် က ကလေးတွေကြိုက်ကြလို့ပြန်လုပ်ကြည့်ဦးမယ်
ဒံပေါက်ရောင်းတန်းက မဆလာခိုသဗျ ။ စိတ်ကြိုက်မဆလာက ပိုကောင်းပါတယ်
အဆင်ပြေရင် ကျနော်ပြောတဲ့ နည်းအတိုင်း မဆလာစပ်ကြည့်
တစ်ရပ်ကွက်လုံး မွှေးသွားစေရမယ် ဟဲဟဲ:harr:
စွယ်စုံ ရတဲ့ကိုဆာမိပါလား။ ငါးပိလုပ်နည်းကိုလည်း ကူးသွားသလို ခုဒံပေါက်ဖောက်နည်းကိုလည်း
ယူထားလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ချက်စားကြည့်ဦးမယ် ..အော် ဒါနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ဒီအတိုင်းထောင်းထဲ့
ပြီးနယ်တာထက်စာရင် ကြွတ်အောင်ကြော်ပြီးနယ်တာက ပိုကောင်းမလားလို့…ဆရာလုပ်ကြည့်တာ
စမ်းကြည့် သင့် ပါတယ်။မူရင်းမှာတော့ ဆီသပ်တာမတွေ့ ဖူးပါ ။တူးတတ်သဖြင့် 
အကယ်၍ ဒီအတိုင်းထည့် လျှင်လည်းမဆလာနှင့် ရောနယ်ပြီးထည့် သဖြင့် 
ကြက်သွန်များနွမ်းနေပြီဖစ်ရာ ကျက်သောအခါ မဆလာအနှစ်များအဖြစ်မြင်ရပါမည်။
စမ်းသပ်ပြီးပြီ၊မအီပဲစားလို့ အလွန်ကောင်းပါကြောင်း။(ချန်ပီယံ အရသာနဲ့တူပါတယ်။ကုလားဒန်ပေါက်တွေလို အနံ့စူးစူးမထွက်သဖြင့် လေချဉ်မတက်ပါ)
တစ်ခုပဲ၊ထမင်းထဲ ဆားမထည့်မိတော့ ပေါ့သွားပါတယ်။
ဆီလည်း နည်းနည်းလေးလျှော့ရင် ပို အဆင်ပြေပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျနော်လည်း ရေခဲမုန့် လုပ်ကြည့် နေတာဗျ။
အဆင်ပြေတယ် ရွှေပုဇွန်သွားစရာမလိုတော့ ဘူး။
နှစ်ခါရှိပြီ စမ်းလုပ်ကြည့် တာ ။ပထမတစ်ခါက အရောင် အနံ့ မရှိသေးလို့ 
မထညမ့ ပေမဲ့  ကောင်းတာပဲ အခု ဒုတိယတစ်ခါကတော့အားလုံးအပြည့် အစုံ
ထည့် ပြီးလုပ်လိုက်တာ OK ပဲဗျ။ ကျေးဇူးပဲ အစ်မကိုလည်း အော်ဒါပြန်မှာလို့ ရပြီနော် ဟဲဟဲ…….
အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ ဆီ ၊ အချို နဲ့  အငန်ကတော့ 
ကိုယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ကြည့် သုံးရတာပေါ့ ။ နို့ စိမ်းနဲ့ ကြက်သားနှပ်တဲ့ အတွက်
ထောပတ်ကိုလျော့ လို့ ရပါတယ်။ နှစ်ခါလောက်ချက်ကြည့် ရင် အပြီးအပိုင်
လက်တည့် သွားမှာဗျ။ ဟဲဟဲ ကျနော်လည်းစားဖိုမှုးအဖွဲ့ ထဲ ရောက်တော့ မယ်ထင်တယ်
ကရင်ရိုးရာ တာလဘော့ဟင်းချက်နည်း မူကွဲလေးလည်းရေးဖို့ အကြွေးကျန်နေသေး ………..
နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲအတွက် စရံပေးထားလို့ ရမလား။
ဒီနေ့ပဲစမ်းချက်ကြည့်တယ်။ ဆီနည်းနည်းလျှော့ထည့်ပြီး အရသာမရှိမှာစိုးလို့သကြားနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်။အလုပ်ရှင်းသော အရသာရှိပြီး မအီသော အဖိုးတန် ဒန်ပေါက်ချက်နည်းကောင်း တခုဖြစ်ပါကြောင်း ထောက်ခံစာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူဖော်မှန်းမသိ ခုမှ ဖတ်မိတယ်။
ဘက်စုံ ကိုရင် ဆာမိပါတကားးးးးးးး
နောက် တစ်ပတ် ၄ ရက်ပိတ်မှာ စမ်းရမယ်။
ဒန်ပေါက်နဲ့ ရေခဲမုန့်အရောင်ဆိုးတာ ကျနော် တာဝန် ယူမယ်..
ဆီဆေး ကြိုက်လား..ေ၇ဆေး ကြိုက်လား…. စားသုံးမယ့် ရွာသားတွေ သဘောထားကို ကြိုမေးတား..
အကူအညီကတော့.. ခပ်မိုက်မိုက် လက်ရဲ ဇက်ရဲ ..ဓါတ်သိတွေထဲက ၂ယောက်လောက် လိုမယ်..။